Uhlaziya Njani | May 2022
Yintoni ipeyinti yeSemi Gloss? -I-Flat vs Satin Vs. Iitayile zePaint-Gloss
Kukho itoni yeepeyinti ezahlukileyo zokukhetha xa ukhangela inkangeleko entsha yeendonga zakho - kodwa kuthetha ntoni oko? Ukusuka kwisilayidi esisicaba ukuya kwiflethi (ekwabizwa ngokuba yi-matte), nayo yonke into ephakathi, ukukhangela ukugqitywa kokunokubonakala kungumsebenzi otyhafisayo.
Yimalini Itafile zakhiwe Granite? - Iitafile zeGranite zibiza ixabiso ngeenyawo nganye
Thintela ingxaki yohlahlo-lwabiwo mali kwaye wazi izibalo zakho ngaphambi kokuba uzibophelele.
I-21 yeeKhikhi zekhitshi ezingaphambi nangemva kweefoto- Olona tshintsho luLungileyo lweKhitshi
Ezi zinto zenziwe ekhitshini zezinye zezona nguqu zihle ngalo lonke ixesha. Jonga ngaphambili nasemva kweefoto ukuze uphefumlelwe ngokwakho.
Uyisebenzisa kanjani i-Power Drill- Isikhokelo seVidiyo esiQalayo kwii-Power Drill
Ukujija amandla kunokubonakala ngathi sesinye sezixhobo ezinesidingo esinzulu se-DIY-er, kodwa silapha ukukuxelela ukuba yinto ekufanele ukuba nayo yonke into abanini khaya (okanye irente!). Nokuba ukubhola ngamandla okusisiseko kunokwenza umahluko omkhulu kwimisebenzi yekhaya yemihla ngemihla, ukuxhoma isipili (i-anchor yeyona ndlela ikhuselekileyo ngalo lonke ixesha) ekuhlanganiseni ifanitshala (ngokukhawuleza okukhulu). Sibuze ikontrakta uMeredith Okwangoku, umnini kunye nomsunguli we-NYC esekwe kuyilo-lwakhiwo lweprojekthi ye-Meredith, ukuba sihambe ngento ekuthiwa yeyokuqhuba kombane kunye nendlela yokusebenzisa ngokukhuselekileyo.
Ngaba unokupeyinta iVinyl Siding? -Ipeyinti efanelekileyo yeVinyl Exteriors
Sonke sinqwenela ukuba sibe nebhodi eqhotyoshwayo yokwenyani, kodwa inyani kukuba, ngamanye amaxesha ayikho kuhlahlo-lwabiwo mali (okanye kwirenti). Ke, ukuba usebenza ngevinyl, nantsi indlela yokupeyinta ngokufanelekileyo.
Yiyo le nto abaPeyinti abaNgcali benxiba iMhlophe
Khawuzibuze ukuba kutheni abapeyinti abaziingcali bahlala benxibe ezimhlophe entloko? AWUKHO wedwa. 'Ngomnye wemibuzo ebuzwa rhoqo kolu shishino lwepeyinti,' utshilo uCraig Bunting, umlawuli wecandelo lobungcali kwaBenjamin Moore.
Iingcamango ezingama-20 + ze-Staircase zokuHombisa ii-Stair Designs
Fumana izimvo ezizodwa zokuhombisa izitepsi zakho.
Ungawutshintsha njani uMbane oKhanyayo ngaphandle kokuqesha umbane
Ngokwesiqhelo, ndinokuba ndiqeshe umbane, kodwa ekubeni nditshintshe izinto ezikhanyayo ngaphambi kokuba ndikuxelele ukuba ayisiyiyo eyona DIY iphambili. Nantsi indlela yokwenza.
Iingcamango ezili-17 zoLwakhiwo loDonga, ukusuka kwiLaphu leDonga ukuya kwiPeyinti eliCociweyo
Sijonge ishumi elinesithathu kwimibono yoyilo lodonga ukuze sikhuthaze ngaphakathi ngaphakathi ukusuka kumgangatho ukuya kuphahla. Khetha okuthandayo ukuphinda wenze ekhaya, okanye uzame konke.
Ukubeka iikhabhathi Vs. Ukugquma ngokupheleleyo Vs. Amacango eKhabhinethi aKwahlukileyo
Iingcango zekhabinethi zingaphezulu kokujongeka: Izimbo ezahlukileyo zeminyango zibonisa iintlobo ezahlukeneyo zokwakhiwa kwesakhelo, ezichaphazela indawo yokugcina, ukubekwa, kunye nobukhulu bekhabhinethi.
Ungawukhetha njani uMgangatho woMgangatho oLungileyo weHardwood
Ukufaka i-hardwood flooring entsha kutyalo-mali olukhulu, elenza ukuba ukhethe ekunene kube nzima ngakumbi, ngakumbi kumgangatho weenkuni newbie. Ngaba i-oki ingcono kune-walnut? Yintoni ejongene neethoni ezifudumeleyo? Ngaba umgangatho okhanyayo uyindlela yentlekele? Saya ngqo kwiingcali ukuya kufumanisa ukuba yintoni abaninikhaya ekufuneka bayazi.
Izixhobo ezili-10 eziBalaseleyo oziFunayo kwiKhaya lakho-Izixhobo eziSebenzayo eziSebenzayo
Ezona zixhobo zibalaseleyo ze-DIY, iirenti, kunye nokuba ngumnini makhaya, ezi zixhobo zininzi zisetyenziselwa imeko engxamisekileyo yemihla ngemihla. Siphonononga eyona drill, isando, isikrufu kunye nokunye.
Amachibi okuqubha endalo-Ngaba kufanelekile ukuba ubeke iphuli yokudada kwindalo yakho?
Iphuli yokubhukuda ayisiyiyo kuphela. Apha, iingcali zabelana ngeengcinga zazo kumachibi endalo kunye namachibi etyuwa ukunceda ukwenza indawo yakho yangasemva ikhanye kweli hlobo.
Eyona Khitshi yeKhitshi eQhelekileyo esuka eDepho yasekhaya- iiNdawo zokuKhwela zeKhompyutha ezingasileliyo
Nokuba sele unayo ibhodi yePinterest efanelekileyo yokuphefumlelwa ekhitshini engqondweni, ukufumanisa ukuba indibaniselwano yekhabethe egqibeleleyo inokuba ngumsebenzi otyhafisayo. (NGOKU. KWININZI. IINKETHO.) Kodwa ukufumana iziqwenga ezisebenza kunye kulula kunokuba ucinga-kwaye awunyanzelekanga ukuba ulahle isiqingatha sebhajethi yakho kuzo, nazo. Ukukungqina oku, umnikeli weNdlu u-Eddie Ross waya kwiDepho yaseKhaya yakhe ukuze athabathe i-quartet yee-suites zehardware ezingaphumeleli ezibonakala kwinqanaba lomyili kodwa ngaphandle kwexabiso lesiko. Nokuba ujonge ukongeza ubukhazikhazi ekhitshini lakho okanye ungaphezulu malunga nokucekeceka nokulula, awungekhe uhambe gwenxa nangazo naziphi na kwezi zinto zine zibukeka zimangalisayo.
Nantsi indlela onokuguqula ngayo i-IKEA yeBilly Bookshelf kwi-Bookcase yakho eyakhelwe ngaphakathi
Iibhukhsi ezakhelweyo ngaphakathi ziyindlela entle yokongeza ukugcinwa kunye nomlinganiswa kwindawo ohlala kuyo. Fumanisa ukuba ungayenza njani i-DIY yakho eyakhelwe ngaphakathi kwikhabhathi.
Abantu abaninzi bacela izindlu zangasese ezahlukileyo-ezakhe kunye nezakhe iingcamango zokuhlambela
Izithuba ezahlukileyo sisicelo seday, uninzi lwabayili luyilo. Malunga neepesenti ezingama-75 zabathengi ngoku bacela 'izindlu zakhe zokuhlambela nezakhe,' ke esi sibini sinokuba nendawo yaso yokwenza ishishini laso.
Iindidi ezi-7 zezikhonkwane Wonke umninikhaya kufuneka azi malunga neziQinisekiso eziqhelekileyo
Kukho iintlobo ezininzi ze-screws kunye ne-fasteners ngaphandle kwaye ngamanye amaxesha kunzima ukugcina umkhondo. Nazi iindidi eziqhelekileyo zezikrufu oza kudibana nazo kwaye uza kuyisebenzisa nini nganye.
Iindawo eziPhambili zokuNikela ngeFenitshala yakho yakudala kunye nezinto zeNdlu
Izisa zihlala zisamkela ifanitshala, iimpahla zasekhaya, izinto zokulala kunye neminikelo yezixhobo. Nazi iindawo ezilungileyo zokunikela ngezinto zakho ezindala.
Iindidi zeBhalbhu eziKhanyayo ezi-6 yeyona yeyona Milo yeBhalbhu yokuKhanya aziwa kakhulu
Amathuba kukuba, usebenzisa iibhalbhu zokukhanya yonke imihla, kodwa ngaba ukhe wazibuza ukuba yeyiphi 'eyona ilula kakhulu? Nazi iindidi ezahlukeneyo zebhalbhu zokusebenzisa.
Iindawo zokuthengisa ze-S-Box Pop-Up ezifihliweyo kwiiNqaku lakho
Sala kakuhle kwiivenkile ezimbi! Kwiprojekthi entsha, uNicole Fuller ubonakalisa iindidi ezinobuchule oziguqula umdlalo kuyilo.
Eyona yoyilo yegumbi lokuhlala
ukuwa kwetafile yokuhombisa izimvo
izindlu zecontainer zokuhambisa